Maxey maanta ka wada-hadleen Ergayga QM iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka? – Kalfadhi
October 22, 2019 October 22, 2019 Hassan Istiila
Ku-simaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursad Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa maanta xafiiskiisa kula kulmay ergayga gaar-ka ah ee xoghayaha QM uqaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Amb James Swan.
Xoghayaha guud ee Baarlamaanka Cabdikariim Xaaji Cabdi Buux, oo kulanka goob-joog ka ahaan ayaa Kalfadhi u sheegay, in kulanka looga hadlay arrimo ay kamid yihiin, Sharciga Doorashooyinka, Dhammeystirka Dastuurka, xiriirka maamul-gobolleedyada iyo nimaddanka federaalka ee Soomaaliya.
Safiirka, ayaa sheegay in delaallo badan uu baarlamaanka gelinayo sharciga doorashooyinka iyo dhammeystirka Dastuurka KMG ah.
Dhinaca kale, Soomaaliya Amb James Swan, ayaa carabka ku adkeeyay wada-shaqeynta labada gole ee Baarlamaanka in ay u wanaagsantahay daadejinta shuruucda hor-tebinta u leh Baarlamaanka iyo sidoo loo dhammeystiri lahaa.
Waxyaabaha ay aadka uga hadleen waxaa mid ah arrimaha dib-u-eegista dastuurka iyo dhameystirkiisa iyo sidoo kale sharciyada muhiimka ay ay tahay in la meel mariyo. Sidoo kale kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo wakiilka xoghayaha guud ayaa inta kulanka uu socday isla soo hadal qaaday xoojint xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qaramada midoobay
Waxaana ku-simaha madaxweynaha uu James Swan uga warbixiyay xaaladda guud ee dalka iyo sida ay muhiim u tahay in qaramada midoobay ay dar dar geliso taageerada kala duwan ee ay siiso baarlamaanka.
Ku-simaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursad Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa sheegay intii kulanka uu socday in Kalfadhiga 6-aad ee hadda socda in uu noqon doono midka ugu shaqadda badan ee Baarlamaanka, madaama laba Kalfadhi oo keliya uu u harsanyahay Baarlamaanka Soomaaliya.